Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Manafina zavatra? Nandà ny hamoaka ny boaty mainty nianjera tamin'ny fiaramanidina Okrainiana i Iran
Nanambara i Iran fa tsy hamoaka ny 'boaty mainty' amin'ny Fiaramanidina mpandeha Boeing 737 Okrainiana, izay nianjera tany akaikin'i Tehran ny Alarobia, na tany Ukraine, na Boeing.
Namaly ny fianjerana, Boeing nilaza tamina fanambarana fa vonona ny "hanampy amin'ny fomba ilaina rehetra" izy, fa ny lehiben'ny Fikambanan'ny sidina sivily Iran nilaza fa i Tehran dia hanao ny fanadihadiana azy manokana momba ilay fianjerana. Nanampy izy fa ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily Okrainiana dia 'avela' ho eo mandritra ny famotopotorana.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra Iraniana dia mitohy ny fanadihadiana momba ny lozabe ary mbola tsy nanapa-kevitra hoe aiza no halefa ilay boaty mainty hanaovana famakafakana.
Boeing 737 izay tantanan'ny Ukraine International Airlines no nianjera taoriana kelin'ny niaingany tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Imam Khomeini any Tehran ny alarobia lasa teo, ary namono olona 176 tao anaty sambo. Nanoro hevitra i Okraina tamin'ny voalohany fa noho ny tsy fahombiazan'ny mekanika no nahatonga ny loza, saingy taty aoriana dia nokosehiny ny fanambarana nataony.
Nilaza ny kaompaniam-pitaterana an'habakabana Okrainiana fa “anaty toerana tena tsara” ilay fiaramanidina talohan'ny sidina farany niainany avy tany Tehran nankany Kiev, hoy i Evgeny Dykhne, filohan'ny orinasa, tamin'ny mpanao gazety tao Kiev. Ilay fiaramanidina, nofaritana ho iray amin'ireo "tsara indrindra" amin'ny fiaramanidina misy ny orinasa, dia efa nojerena roa andro talohan'izay.
Ny filoham-pirenena Okrainiana Volodymyr Zelensky dia niantso ny besinimaro mba tsy hieritreritra an'izay mety nahatonga ny fianjerana. Nanamafy ny minisitry ny raharaham-bahiny any Ukraine fa nifandray tamin'ny mpiara-miasa Iraniana, Mohammad Javad Zarif izy, ary samy nanaiky ny handrindra ny ezaka ataon'izy ireo hamantatra ny antony nahatonga ilay fianjerana “mahatsiravina” ny firenena roa tonta.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny Okrainiana dia nanambara fa anisan'ireo maty nandritra ny fianjerana tamin'ny Alarobia dia 82 ny Iranianina, 11 Okrainiana, 63 Kanadiana, Afghana efatra, Alemanina telo, teratany anglisy telo ary Suède 10.